खोप लगाउन जाँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् - नेपाली आवाज खोप लगाउन जाँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् - नेपाली आवाज
श्रावण ०४, २०७८
खोप कहाँ, कहिले र कसरी लगाइन्छ भन्नेबारे पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर थाहा पाउन सकिन्छ । सम्बन्धित जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको खोप समन्वय समितिको निर्णयको आधारमा जिल्लाभित्र कहाँ केन्द्र राख्ने, कसलाई लगाउने र कहिलेदेखि लगाउने भनेर निर्णय गरिएको हुन्छ ।
जिल्ला तहमा भएका निर्णय थाहा पाउनका लागि पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमबाट पनि खोपबारे सूचना वा जानकारी प्रवाह भइरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले, खोप केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित बनाउँदै सहज तरिकाले खोप लगाउने वातावरण बनाउनका लागि खोप केन्द्रमा खटिएकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
खोप केन्द्रमा भीडभाड हुन नदिन के गर्ने ?
खोप लगाउनुपर्ने व्यक्तिहरु अथवा लक्षित वर्गमा परेका व्यक्तिहरुका लागि खोप लगाउनका लागि पाँच, सात दिनको समयअवधि तोकिएको छ भने पहिलो र दोस्रो दिन धेरैजना एकैपटक गयौँ भने अवश्य पनि भीड हुन्छ । पहिलो दिन सहज हुनेले पहिलो दिन, दोस्रो दिन सहज हुनेले दोस्रो दिन र तेस्रो दिन सहज हुनेले तेस्रो दिन र अन्तिम दिनतिर सहज हुनेले अन्तिम दिन खोप लगाउन जाँदा धेरै भीडभाड नहुन सक्छ ।
अर्को कुुरा भनेको लक्षित वर्ग मात्र तोकिएको समयमा जानुपर्छ । लक्षित वर्गभन्दा बाहेकका अरु वर्ग खोप केन्द्रमा गएर मलाई पनि खोप चाहिन्छ भनेर अनावश्यक दबाब दिनु हुँदैन । आफ्नो पालोमा मात्र खोप लगाउन जानुपर्छ ।
आफू केको आधारमा खोप लगाउन जाँदैछु भन्ने कुराको ध्यान दिनु पर्छ । उमेर अनुसार हो भने उमेर खुल्ने परिचयपत्र साथमा लैजानुपर्छ । कुनै सेवाको आधारमा खोप लगाउन गइएको छ भने सेवा गरिरहेको हो भन्ने कुरा खुल्ने परिचयपत्र लैजानुपर्छ । अथवा कुनै अपाङ्गता भएका कारण खोप लगाउन गएको भए त्यसको पनि आवश्यक कागज साथमा लैजानुपर्छ । त्यस्तै विदेश जानुपर्ने कारणले खोप लगाउनु पर्नेछ भने विदेश जानुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको कागजात लैजानुपर्छ ।
खोप केन्द्रमा गएका जति सबै सुरक्षित हुँदैनन् । कोरोना भएर कसैलाई लक्षण देखिएको वा कसैलाई नदेखिएको हुन सक्छ । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको छ भने खोप केन्द्रमा जानु हुँदैन । छुटेकाहरुले पछि पनि खोप लगाउन पाइन्छ ।
‘सबैलाई पुग्ने गरी खोप ल्याउन तयारी भइरहेको छ’
खोप केन्द्रमा जाँदा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ । अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनुपर्छ । खोप केन्द्रबाट फर्किसकेपछि कसैले कोरोना सारेको छ कि भनेर आफ्ना सामानहरु बाहिर राख्ने, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने र दुई, चार दिन आफूलाई अनुगमन गर्न सके सङ्क्रमणको चक्र रोक्न सकिन्छ ।
जति धेरै खोप केन्द्र भयो, त्यति धेरै सहज हुन्छ । भीडभाड कम हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक लगायतका समस्या भएका नागरिकलाई जान सहज हुन्छ । तर कतिपय कुराहरु प्राविधिक कारण, स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनको कारण र सुरक्षाको कारणले समस्या हुन सक्छ । अहिले खोपको धेरै माग छ । पछि खोप पाइँदैन कि भन्ने डर धेरैमा छ । सबैलाई पुग्नेगरी खोप ल्याउने तयारी भइरहेकाले डराउनु पर्दैन ।
केन्द्रहरु सकेसम्म धेरै बनाउनका लागि अनुरोध गरिएको छ । त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ । दैनिक रुपमा खोप केन्द्रहरुमा भइराखेका कुराहरुको विषयमा सरकारले समीक्षा गर्दै आएको छ । आफूले देखेका, सञ्चारमाध्यममा आएका र आयोजकहरुको रायका आधारमा समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
चाँडो भन्दा चाँडो खोप लगाएर फर्किनको लागि व्यवस्था गरिदिनका लागि सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ । लामो समय लाइनमा नबस्ने गरी, भौतिक दूरी कायम गर्ने विषयमा ध्यान दिन उहाँहरुलाई भनिएको छ । खोप लगाउन आएकाहरुलाई सहज तरिकाले खोप लगाएर पठाउँनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।
एक डोज लगाएर, दोस्रो डोज लगाउन नपाएकाहरु, अहिल्यै खोप लगाउन पाउनुपर्यो भन्नेहरु, पहिला एक डोज लगाएको तर अहिले लगाउन नमिल्ने लगायतका वर्गहरु केन्द्रमा आएका हुन सक्छन् । रिसाउन सक्छन् । यस्ता विभिन्न खालका मानिसहरु आउँदा कसैसँग झिँजो नमानिकन यथार्थ जे हो त्यही, मिठो भाषामा सम्झाएर व्यवस्थापन गर्न सबैलाई अनुरोध गरिएको छ ।
कोरोनाको बिरामीको उपचार स्वास्थ्यकर्मीहरुले निक्कै प्रभावकारी रुपमा गरिएकाले निक्कै प्रशंसा भएको छ । त्यो प्रशंसालाई पछिसम्म कायम राख्ने गरी व्यवहार गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
आफ्नो र अर्को भनेर भेदभाव नगरौँ
स्वास्थ्यकर्मीहरुले तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । यो आफ्नो मान्छे, यो अर्काको मान्छे भनेर भेदभाव गर्नु हुँदैन । लक्षित वर्गलाई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर खोप लगाइदिएमा व्यवस्थापनमा त्यति गाह्रो हुँदैन । सबै नेपालीलाई खोप लगाइदिनु पर्ने सरकारको दायित्व छ । त्यो सरकारले गर्छ । आफन्तको नाउँमा, चिनेजानेको नाउँमा दबाब दिएको भरमा तोकिएको मापदण्ड भन्दा बाहिर रहेर खोप नलगाइ दिन आग्रह छ ।
कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्राको पर्खाइमा लाखौँ मानिस छन् । उनीहरुलाई दोस्रो मात्राको पनि सुनिश्चितता गरेर नै खोप लगाएको हो । तर भने अनुसारको समयभित्र खोप आइपुगेन। त्यही भएर केही समय उहाँहरुले कुर्नुपरेको अवस्था छ । पछिल्लो समय धेरै समन्वयात्मक विकासहरु भएका छन् ।
धेरै ठाउँबाट उनीहरुका लागि दोस्रो मात्रा खोप आइपुग्ने सुनिश्चितता भएको छ । तर देशभित्र खोप नआइकन खोप लगाइने समय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । जापान लगायतका देशहरुबाट चाँडै खोप ल्याउने प्रयासहरु भइरहेका छन्। खोप आउने बित्तिक्कै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर खोप अभियानमा सहभागी हुन अनुरोध गरिन्छ ।
(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिर कुमार अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
नयाँ वर्षको अवसरमा सिद्धार्थ हार्डवयर एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.का कर्मचारीद्वारा रक्तदान
टाइफाइड खोप सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्टी सम्पन्न
एकैदिन १० हजार २५८ जनामा कोरोना पुष्टि